सासुको खुकुरी प्रहारवाट ज्वाँई गम्भीर घाइते » Farakkon
सासुको खुकुरी प्रहारवाट ज्वाँई गम्भीर घाइते
बिहीबार, कार्तिक २१, २०७६ ११:०९
दाङ,कात्तिक २१ । दाङमा एक सासुको खुकुरी प्रहारबाट ज्वाँई गम्भीर घाइते भएका छन् । शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ३ निवासी ३१ बर्षीय गणेश चन्दलाई माइती गएको समयमा बुधवार बेलुका सासुले खुकुरी प्रहार गरि गम्भीर घाइते तुल्याएको जिल्ला प्रहरी प्रबक्ता विनोद विक्रम शाहले जानकारी दिए ।
घाइते चन्दलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रारम्भीक उपचार पछि गएराति नै थप उपचारको लागि बाँकेस्थित कोहलपुर मेडिकलकलेजमा रेफर गरिएको डिएसपी शाहले बताए ।
पत्निसंगै घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० नारायणपुरस्थित सुसुराली गएको समयमा चन्दमाथि ४१ बर्षीया सासु आमा मधुकुमारी मल्लले छोरीलाई कुटेको भन्दै खुकरी प्रहार गरेको भन्ने खुल्न आएको डिएसपी शाहले जानकारी दिए ।
घाइते चन्द र उनकी पत्नि २२ बर्षीय सरस्वती मल्लका बीचमा बुधवार बेलुका पौने ९ बजेतिर सामान्ने विवाद पछि कुटाकुट हुँदा त्यही समयमा चन्दमाथि उनकी सासुले टाउकोमा खुकुरी प्रहार गरेकी थिइन ।
घाइते चन्दलाई गएराति पौने ११ बजे थप उपचारको लागि बाँकेको कोहलपुर रेफर गरिएको थियो । खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा सासु मधुकुमारी मल्ललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । डिएसपी शाहका अनुसार घटनावारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।